Oniversite Ankatso – Nitarika tamin’ ny fifidianana ny Pr Ramanoelina Panja - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Oniversite Ankatso – Nitarika tamin’ ny fifidianana ny Pr Ramanoelina Panja
Tsy lany ho filoha hitantana ny oniversiten’ Antananarivo intsony Andriantsimahavandy Abel, raha araka ny valin’ny fifidianana notontosaina omaly. Ny profesora Ramanoelina Panja no nitarika tamin’ny isan’ny vato azo. Teo amin’ny laharana faharoa kosa ny Filoha teo aloha. Raha ny vokatra taorian’ny fifidianana izany no zohiana dia ny Pr Ramanoelina Panja indray no hitantanana ny oniversiten’Antananarivo, ao anatin’ny telo taona manaraka. “Izy avokoa no nitarika ny filaharana mane- rana ny sampam-pianarana rehetra, hatramin’ny mpan- draharaha”, hoy Randrian-tiana Richard, komity nikarakara ny fifidianana.
Oniversite, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 09:58	FIARAHAMONINA